u-Frylinck ubheke ukugcina izinto zilula enkundleni enkulu
Okwenza konke kuma-Standard Bank Proteas, u-Robbie Frylinck, uzobe ebheke ukugcina izinto zilula kumdlalo we-KFC T20 International series bedlala ne-Bangladesh ezoqala e-Mangaung Oval e-Bloemfontein ngoLwesine. U-Frylinck uchaze ukubizelwa umdlalo wakhe wokuqala eneminyaka engu-33 ‘kumangaza’, futhi lelithuba lizomenza adlale ngokuzikhandla emuva kohambo olude ukufinyelela phezulu.
“Ufika kwisigaba lapho ocabanga ukuthi mhlawumbe akukufanele nokuthi ngeke kwenzeke,” ekhuluma emuva kokuqeqesha okokuqala e-Bloemfontein ngoLwesibili. “Akushintshi lutho kulokhu engikwenzile eminyakeni edlulile ngikwenzela i-franchise yami. Ngilenhlobo yomdlali, uma ngifika enkundleni, nginikeza ama-percent angu-200 noma umphumela uzothini noma ikuphi engifuna ukukunqoba.”
“Ngangihlezi ngumdlali olwayo enkundleni futhi nginikela ngakho konke,” esho echaza. “Lokhu kufike ngokumangaza kimina kodwa bengikulindele isikhathi eside ngakho ngizonikela ngakho konke.”
u-Frylinck sewahamba wafika kude kuma-T20, wadlala imidlalo engu-87 kwi-Indian Premier League ne-Caribbean Premier League kumdlalo wakhe weminyaka eyishumi. Uthi uzoncika kwizinhlelo zakhe zomdlalo azaziyo futhi ezimsebenzelayo njengohlelo lempumelelo, futhi uzobe ebheke ekugcineni izinto zilula nokho inhlobo yekhilikithi inencindezi.
“Hlezi kunezinhlobo zencindezi,” kusho u-Frylinck. “Yonke imidlalo inencindezi yawo, lo uzoba nencindezi embalwa. Ngifike eminyakeni lapho engingazami khona izinto ezintsha, ngiyawazi umdlalo wami. Kimina ukugcina izinto zilula, ngincike kwizinhlelo zami zomdlalo ezingifikise lapha, ngithemba ukuthi kuzohamba kahle.”
Lomdlali okwenza konke uthemba ukudlala indima ngokushaya kanye nokuphosa kwi-series, futhi izibalo zakhe zithi angakwenza kokubili. Uphethe irekhodi lokufika ngokushesha ku-50 we-list A, emabholeni angu-19, futhi une-career-best engu-5/16.
“Kwiqembu lama-Proteas ezinyangeni ezidlulile, sesibone ukuthi laba abashayayo bayamangaza,” kusho u-Frylinck. “Ukuthola ithuba lokushaya, sizobona. Indima ebalulekile (all-rounder), nginenhloso ngokushaya nokuphosa. Ngicabanga ukuthi ngizosebenza kakhulu ngokuphosa kunokushaya, kodwa ngingashaya uma kudingeka.”
Amathikithi omdlalo atholakala ku-www.ticketpros.co.za. Umdlalo kumele uqale ngo-18h00.
Ama-Proteas aqede ngokunqoba i-ODI series u-Du Plessis ukhishiwe kwi-KFC T20I series Kusafana nephupho – u-Mulder u-Frylinck ubizwe kwiqembu lama-Proteas kuma-T20 Ama-Proteas ashishiliza ekunqobeni ngama-wicket angu-10 Ama-Proteas aqalela phansi ngaphambi kwe-ODI series u-Miller uzongena kwiqembu lama-ODI angu-100 Ama-Proteas alindele umqhudelwano onzima we-ODI kwi-Bangladesh Ukunqoba kunika ukuzithemba ngaphambi kwehlobo elikhulu – u-Du Plessis i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-Test series bedlala ne-Bangladesh Abadlali abadala badlala indima ekubuseni kwama-Proteas